प्रचण्ड, फरक मत र संविधान – Online Bichar
प्रचण्ड, फरक मत र संविधान
Online Bichar 19th September, 2020, Saturday 12:31 AM
कमरेड प्रचण्ड !! संविधानमा माओवादीको फरक मतको स्वामित्व नेकपाले लिन्छ ?
नेपालको संविधान– २०७२ घोषणा हुनु अघि संविधानको विधेयकमा ०७२ भाद्र २७ गते प्रचण्ड नेतृत्वको एकिकृत नेकपा माओवादी पार्टीले संविधानसभामा औपचारिक रुपमै आफ्ना फरक मतहरु दर्ज गर्यो ।
तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादी पार्टी संविधान घोषणाको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा थियो । प्रतिपक्षीले फरक मत राखेर बिरोध गर्दै सदन अबरुद्ध गरेको भए समयमा संविधान घोषणा हुने थिएन तर संविधानसभाबाट संविधान माओवादीको आफ्नो एजेण्डा भएको कारण अधिकतम् लचिलो भएर संविधान जारी गराउने रणनीतिमा माओवादी थियो ।
अन्ततः एमाओवादीले फरक मतका बाबजुद संविधानमा हस्ताक्षर गर्यो जसका कारण संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भयो ।
माओवादी पार्टीले आफ्ना फरक मतहरु संविधानसभामा दर्जगरी संविधान घोषणा गर्नुमा के सान्दर्भिकता थियो ?
तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादी– नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै हाल नेकपा एमाले सहितको एकिकरणबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) मा परिणत भएको छ ।
हाल प्रचण्ड आँफै नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष छन् । संविधान घोषणा अघि संविधानसभामा माओवादीले दर्ज गरेको फरक मतको औचित्य र स्वामित्व अहिलेको नेकपाले ग्रहण गरेको छ ? कतै प्रचण्ड आफै त पनि अनुत्तरित छैनन् ?
दर्च गरिएका प्रतिनिधिमुलक केही फरक मतहरु यस्ता थिए ः
संविधान संसोधन गर्न अहिलेको दुईतिहाई बहुमतको सरकारको समय सबैभन्दा अनुकुल छ । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र एकिकृत भएर बनेको ठूलो पार्टी नेकपाले तत्कालिन माओवादी पार्टीले पेश गरेका ती संसोधन र परिवर्तनको विषयहरु संवोधन गर्नेगरी संविधान संसोधनको प्रस्ताव ल्याएमा त्यो उत्तम हुने छ । देशको कार्यकारी प्रमुख नागरि आँफूले स्वयम् प्रत्यक्ष चुन्न पाउने छन् ।
“हामी जहाँ जादैछौं, त्यहाँ पुगेका छैनौं, जहाँ थियौं, त्यहाँ पनि अब छैनौं ।” नातासा जेसफोले भनेझैं हामी जहाँ जाँदैछौं त्यहाँ पुग्न संविधानलाई क्रमश आवस्यकता अनुसार संसोधन गर्दै जानु पर्छ र मात्र समाजवादको यात्रा सम्भव पनि छ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको अर्जुन दृष्टी संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणली बनाउनेमा छ । के अबको दुई बर्ष पछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चुन्ने निर्वाचनमा नेपाली जनताले भागलिने सुवर्ण अवसर पाउलान् ?
वर्तमान संविधानमा भएको ब्यवस्था अनुसार यो संविधान देशको आवस्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रवधान राखिएको छ । क्षेत्रीय, वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय भाषिक विभेदको अन्त्यको प्रत्याभूति गरिएको छ । तसर्थ संविधान संशोधनमा उठेका सवालहरु उचित ढंगले संबोधन गरिदा सान्दर्भिक पनि हुने छन् ।
संविधानले शक्ति पृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिलाई अपनाएको हुँदा समय सापेक्ष संविधान संशोधनले पक्कैपनि नेपाली– नेपालीमा एकताको मनोविज्ञानलाई अझ बलियो बनाउने छ । नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पाउनु पर्दछ ।